တစ်ရာကျပ်ကစပြီး စုံပလုံစိနေတဲ့ တုတ်ထိုးဟော့ပေါ့တွေစားနိုင်မယ့် Spicy Pot – FoodiesNavi
တစ်ရာကျပ်ကစပြီး စုံပလုံစိနေတဲ့ တုတ်ထိုးဟော့ပေါ့တွေစားနိုင်မယ့် Spicy Pot
By yin sandi On September 10, 2018 0
တုတ်ထိုးဟော့ပေါ့တအားခေတ်ထနေချိန်မှာ ဘယ်ဆိုင်သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး အဖြေရှာရခက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ မင်မင်အခုပြောပြပေးမယ့်ဆိုင်လေးကို တချက်ရှိုးလိုက်ပါနော်။ သွားစားနေကျဆိုင်တွေထက် ပိုများတဲ့စုံပလုံစိနေတဲ့ တုတ်ထိုးအမယ်တွေကို အကျပ်ရိုက်စွာရွေးချယ်ရမယ့်ဆိုင်လေးဖြစ်သလို အရည်ဖိုးကအစဈေးသက်သာစေရမယ့် ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်နာမည်လေးက “Spicy Pot” ၊ တစ်ချောင်းတစ်ရာကျပ်ကစပြီး အားရတဲ့အထိအဝတွယ်နိုင်မယ့်ဆိုင်လေးပါ။
ဟင်းရည်ဖိုးကတော့ (၇၀၀)ကျပ်ပေးရတယ်။ တုန်ယမ်း မာလာ(အချို/အစပ်)ဆိုပြီး စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ်။ ? ဒီဆိုင်လေးရဲ့အားသာချက်က အမယ်မတရားစုံတာပဲ။ ကိုရီးယားထုံချိုင်းကင်လေးတွေကစပြီး ဂုံး ၊ ပုဇွန် ၊ ကင်းပုဇွန် ၊ အသားလွှာ ၊ ငါးဖက်ထုပ် ၊ ပုဇွန်ဖက်ထုပ်တွေအထိရနိုင်တော့ ခေါင်းစားခံပြီးသာအကြိုက်ရွေးပေတော့။ ဟင်းရည်အရသာလေးကလည်း တော်တော်ဖိုင်းတယ်။ တုန်ယမ်းအရသာလေးကိုတော့ ပိုပြီးသဘောကျတယ်။ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ရှူးရှူးရှဲရှဲလေးဟင်းရည်တွေကြားထဲမှာ အသားဖတ်တွေကိုဆယ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ တော်တော်နဲ့ကိုခေါင်းမဖော်နိုင်မှာတော့ မြင်ယောင်သေးတယ်ကိုယ့်လူ ? အသားတွေကိုလည်း တော်တော်လေးလတ်ဆတ်တော့ အသားရဲ့ချိုမြလတ်ဆတ်တဲ့အရသာ နဲ့ဟင်းရည်ရဲ့အရသာတွေပေါင်းစပ်ပြီး အရသာကပိုမိုထိမိနေရောပဲ။ ?
နောက်ထပ်သဘောကျတာလေးကတော့ (၅၀၀)ကျပ်တည်းနဲ့ Juice အဝသောက်နိုင်တာပဲ။ Hot Pot ဟင်းရည်သောက်လိုက်တိုင်း Juice လေးကူလိုက်ရမှဆိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်ကတော့ လုံးဝရှယ်ပဲ။ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းသလို ဆိုင်လေးကလည်းသန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေတော့ စိတ်တိုင်းကျနိုင်မှာအသေအချာပဲ။ (၅၀၀၀)ဖိုးနဲ့အထက်စားရင် ကတ်လေးမှာတံဆိပ်တုံးတစ်ခုထုပေးတယ်။ တစ်ကတ်လုံးပြည့်သွားရင် (၁)သောင်းဖိုးစားနိုင်မှာဆိုတော့ သိမ်းထားဖို့တော့လိုမယ်နော်။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၉) ၊ ဓမ္မဝိဟာရလမ်း ၊ ကျောက်မြောင်း ၊ တာမွေမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/spicypot
In Restaurant Guides Tagged stick-hot pot Leaveacomment
ဘူးသီးဖတ်လေးတွေထဲ အရသာတွေတိုးဝင်နေတဲ့ ဘူးသီးငပေါင်းကြော်လုပ်နည်း